Archive du 01-juil-2021
Depiote Hanitra Razafimanantsoa “Ny kiantranoantrano no mampisambadidaka ny HCC”
Tsy fahita hatramin’izay teo amin’ny tantaran’ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana na ny HCC ny hoe nisy didy navoaka,
Tsy misy fiatsarany
Raha efa tany amin’ny taona 1970 izany ry mahaleo no efa nahita fa “ny fanantenana efa mihena mitsilopy.”, “tsy misy fihatsarana,”, “izay mety ho fiovana, efa zary nofinofy.
Andavamamba Namono tena nihanika andrin-jiro ilay lehilahy
Lehilahy iray no niakatra teny ambonin’ny andrin-jiron’ny JIRAMA omaly maraina teny Andavamamba. Olona namono tena izy io raha araka ny vaovao azo saingy ny antony no tsy fantatra.
Paositra Malagasy Antaninarenina “Noroahin’ny mpiasa ny minisitra”
Tsy manaiky ny fizarana ny paositra ho orinasa 3 samihafa ny mpiasan’ny paositra Malagasy ka nitokona teo an-tokontanin’ity orinasam-panjakana ity tetsy Antaninarenina omaly.
Rugby Malagasy Nirodorodo any ivelany hihaza amboara
Nanainga omaly Alarobia 30 jona 2021 ireo ekipam-pirenena Malagasy eo amin’ny taranja rugby izay ahitana ekipa telo.
Fitateram-bahoaka Manomboka miverina ny taingim-be
Miha miverina indray ny taingim-be eny anivon’ireo fiara fitateram-bahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina, raha ny tsikaritra tato ho ato.
Fitarihan-drano ao Ambohitrimanjaka 83 tapitrisa ariary no ilaina amin’ny fantsona
Tsy maintsy namory ny sefo fokontany miisa 25 eto Ambohitrimanjaka izahay anio, hoy ny ben’ny tanana ao an-toerana, Ihajason Randriamanalintsoa, omaly.
Faritra Anôsy 12 taona dia efa mivaro-tena ny zazavavy
Manomboka eo amin’ny faha 12 taonany dia efa mivaro-tena ireo zazavavy sasany ao amin’ny faritra Anosy, raha ny fanazavan’ny lehiben’ny fokontany iray ao an-toerana.
Hopitalin’ny zaza Tsaralalana Mandray marary8 hatramin’ny 20 isan’andro ireo
Mirongatra ireo karazan’aretina maro samihafa amin’izao vanim-potoanan’ny ririnina izao. Ankoatra ny aretin’ny taovam-pisefoana izay maro mpahazo ny ankizy tokoa ary miteraka fahasemporana
Kaompanian-tsolika manao izay tiany “Tokony haverina ny SOLIMA !”
Tsy hijanona mihitsy ny menomenontsika malagasy ary hilaza ny teo aloha ho tsara foana isika, hoy ny mpahaitoekarena, Jean Jacques Ratsietison,
Mikatso ny Oniversiten’i Toliara Tsy misy fianarana, tsy misy fanadinana
Miato tanteraka ny asa, tsy misy fianarana, tsy misy fanadinana, tsy misy “soutenance”. Izay no vokatry ny fitokonan’ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ao amin’ny oniversite Maninday Toliara
Fitrandrahana elodrano eto Madagasikara Mampiasa zaza tsy ampy taona marobe
Efa nanomboka tamin’ny taona 2007 no niroso tamin’ny fitrandrahana ny elodrano isika eto Madagasikara. Any amin’iny faritra Anosy sy Androy iny no tena ahitana izany izay ahitana zaza tsy ampy taona
JIRAMA Fantsona 1343 m no hosoloina eny amin’ny La Haute ville
Anatin’ny fanamby napetraky ny JIRAMA mandritra ity 45 taona manaraka ny hanavao ny foto-drafitr’asa rehetra izay manavesatra sy tsy mahatomombana ny tolotra ho an’ny mpanjifa.
Radanoara Julien ‘’Anjarantsika no mitady lalam-barotra hafa”
Efa mafy ny niatrehana ny valanaretina ary vao miha manampy trotraka izany ny zavamisy ny fanakanana ny fidiran’ny vokatra Malagasy any Frantsa toa ny fanafody vita amin’ny zavamaniry sy ny karazan-tsakafo sasany.
Jean Jacques Ratsietison “Toy ny nanaovana an’i Rinah R no hanaingana ny toekarena”
Mazava ho azy fa mety misy hifandraisany amin’ny resaka nosy manodidina ny tsy famelan’ny frantsay ny entana avy eto Madagasikara hiditra any aminy,